၇၁၀၃၁ တွင်ပျောက်ဆုံးနေသော LEGO minifigures ခြောက်ခု Marvel စတူဒီယို
05 / 09 / 2021 05 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 252 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Agatha Harkness, ဒါစီလူးဝစ်, Hanks Pym, Heist Nebula, John Walker ပါ, Lego, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, Mobius, Nebula, Owen Wilson က, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်, Wanda, ဝမ် Maximoff, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
၏ပထမစီးရီး Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား ယခုရနိုင်သည်၊ သို့သော်ရနိုင်သည် 71031 Marvel စတူဒီယို ပိုများသောဇာတ်ကောင်များပြသပြီးပြီလား။
71031 Marvel စတူဒီယို စီမံကိန်းကြီးတစ်လွှားမှထူးခြားသော minifigures ၁၂ ခုပါဝင်သည် Marvel Cinematic Universe သည်၎င်းတို့အတွက်သာပေးနိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလတ်များနှင့်အစိတ်အပိုင်းသစ်များကိုယူဆောင်လာသည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား.
ကိုမှီဝဲခြင်း Disney+ ရှိုးပွဲများ၊ ဤတွင်ပထမနေရာအတွက်ထိုက်တန်သောနောက်ထပ်အက္ခရာ ၆ လုံးရှိသည် Lego Marvel minifigure စီးရီး။
WandaVision ၏အဓိကရန်သူနှင့်အံ့သြဖွယ်လူကြမ်းအဖြစ် Agatha Harkness သည် The Scarlet Witch ၏တကယ့်အဖြစ်မှန်ထဲသို့သူမကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းလိုက်ပြီးသူမ၏စွမ်းအားများကိုရယူနိုင်ရန်အတွက် Wanda ကိုခုတ်မောင်းရန်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်မှော်ကိုသုံးခဲ့သည်။
ရွေးချယ်စရာဒီဇိုင်းများစွာဖြင့် Agatha Harkness ၏အထင်ရှားဆုံးပုံပန်းသဏ္ာန်မှာသူမလွန်ခဲ့သောကာလမှစုန်းများခေတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောရှည်လျားသောစီးဆင်းနေသောသင်္ကန်းများ ၀ တ်ထားသည့်နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲမှဖြစ်သည်။ သေးငယ်သည့်ပုံသဏ္ဌာန်သည်ခြေဖဝါးများနှင့်လိမ်ထားသောဆံပင်များနှင့်သင့်လျော်သောရှုပ်ထွေးနေသောဆံပင်အချို့ကိုသုံးနိုင်သည်။
နေတုန်း 71031 Marvel စတူဒီယို ခဲ့ Captain America ကိုယ်စားပြုမှု၏အစိတ်အပိုင်းအချို့ထက်ပိုသည်Falcon နှင့် Winter Soldier မှအဓိကဇာတ်ကောင်တစ် ဦး သည်အကွာအဝေးမှပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သည်။
John Walker ဟုလူသိများသော US Agent သည် Captain America အသစ်ဖြစ်လာရန်ရည်ရွယ်သောစီးရီး၏သူရဲကောင်းဆန့်ကျင်သူဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သူ၏နည်းလမ်းများသည်ဒိုင်းလွှားပါလာသောသူများနှင့်မကိုက်ညီဘဲ Sam Wilson ကဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ ဤဇာတ်ကောင်၏သေးငယ်သောပုံသဏ္န်သည်သူ့ဝတ်စုံနှင့်လိုက်ဖက်ရန်ရှိပြီးသားအပိုင်းအစများကိုရိုးရှင်းသောပြန်လည်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့်အကွာအဝေးသို့မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းသစ်ကိုမှယူဆောင်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
WandaVision မှအခြားအဓိကဇာတ်ကောင်အနေနှင့် Darcy Lewis သည်သူမ၏ပညာ၊ ကောက်ကျစ်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုတို့ကို သုံး၍ hex အတားအဆီးကိုနှိမ်နင်းရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ သူမဟာစူပါဝတ်စုံမ ၀ တ်နိုင်ပေမယ့်သူမရဲ့အခြားတူညီဝတ်စုံကအနိမ့်ဆုံးလို့ပြောရလောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိခဲ့တယ်။
SWORD အခြေစိုက်စခန်းကို The Scarlet Witch မှဆပ်ကပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်သောအခါ Darcy သည်ရွှေခလုတ်များဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသောအနီရောင်နှင့်အပြာရောင်အင်္ကျီကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့သောဒီဇိုင်းသည် minifigure p ၏မတူကွဲပြားသောစုဆောင်းမှုအတွက်ပြုလုပ်နိုင်သည်arts သည်ဇာတ်ကောင်ကိုကိုယ်စားပြုနေစဉ်၊ အစုစုသို့မိတ်ဆက်ရန်
Loki duo စီးရီးတွင် Loki duo အတွဲတစ်တွဲအဖြစ် Mobius သည်ကံမကောင်းစွာဖြင့်ထွက်ခွာခဲ့သည် 71031 Marvel စတူဒီယိုမရ။ Owen Wilson ကသရုပ်ဖော်ထားသောဇာတ်ကောင်သည် Loki ကိုစစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည့် Time Variance Authority ၏ Agent တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Mobius နှင့် TVA ၏နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလတ်များကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်သူ၏ Collectible Minifigure အတွက်အလားအလာရှိသောအသုံးအဆောင်ဖြစ်သော Jet Skis ကိုနှစ်သက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
Heist Nebula မှဇာတ်ကောင်၏ပျော်ရွှင်စရာဗားရှင်း Marvel's What if ... ?၊ အပိုင်းသစ်များတွင်အလားအလာအကောင်းဆုံး minifigures များ၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်စုစည်းမှုတစ်ခုယူလာရန်ကူညီနိုင်သည်။ Marvel စုဆောင်းသူများအတွက်ပြန်ယူပါ။
Nebula ၏နောက်ဆုံးပုံသဏ္န် Lego set ထဲမှာရှိခဲ့ပါတယ် 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲသူမဟာအခြား Avengers များကဲ့သို့အဖြူရောင်ခရီးသွားယူနီဖောင်းကိုဝတ်ထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူမ၏ခရမ်းရောင် ၀ တ်စုံသည် ၂၀၁၇ ကတည်းက ၀ တ်စုံတွင်မပါ ၀ င်သေးပါ။ Heist Nebula ကို minifigure ပုံစံသို့သယ်ဆောင်ခြင်းသည်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲရန် (သို့) ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ခြေထောက်များကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်အခွင့်အလမ်းပေးနိုင်သည်။
၏တတိယဇာတ်လမ်းတွဲ Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? E ကိုမြင်တယ်arth ၏အင်အားအကြီးဆုံးသူရဲကောင်းများသည်၎င်းတို့စုဝေးရန်အခွင့်အလမ်းမရှိမီတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်လဲကျသွားသည်။ SHIELD သည်လူသတ်သမားအားရှာဖွေနေစဉ် Hank Pym သည်သူ၏သမီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်လက်စားချေရန်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Ant-Man မှ Yellowjacket နှင့်ဆင်တူသောဒီဇိုင်းကိုဆွဲယူခြင်း၊ Hank Pym အတွက်ဤ minifigure သည် minifigures နှစ်ခုကိုတစ်ခုအဖြစ်ပေါင်းစပ်နိုင်ပြီး၎င်းတွင်ပါဝင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းမှာ Tony Stark ကိုဖယ်ရှားရန်သူပြန်ပေးဆွဲခဲ့သောမူလအပ်တစ်ချောင်းဖြစ်သည်။
← ငါတို့နောက်ထပ် LEGO အစုံလေးခုလိုအပ်တယ် Marvelရှန်ချီ
ဤ LEGO Adidas Superstar mech မော်ဒယ်သည်လမ်းလျှောက်ရန်ပြုလုပ်သည် →